Zoma 08 Martsa 2019. – FJKM
Zoma 08 Martsa 2019.
1 Mpanjaka 9.10-28
Lesona 3 indray no ianarantsika eto:
1-Tandremo sao manombina ny fahasoavana omena anao ho an’ny fahavalo ianao.Ny and 10-14 dia ahitantsika fa nanombia taminn’y tany Kanana omena an’i Hirama i Solomona . Fahadisoana lehibe izany :lova avy amin’ny Tompo ve dia omena ny Jentilisa ? Tandremo fa ny fivarotan’i Esao ny fizokiany dia tsy hainy navotana intsony , na dia nifona tamin-dranomaso aza izy (Heb 12.16-17). Fa saino koa na ny fampiasanao ny andro Alahady izay « Andron’ny Tompo » aza , omenao manontolo ny Tompo ve sa anombinanao hanaovana fivoriam-pianakaviana sy filamboly ka tsy andehanana mivavaka ?
2-Fehezo hanoa anao ireo fahavalon’ny fanahinao. Ny and 20-21 dia mendrika homarihana : tamin’ny andron’i Solomona vao voafehy hanompo azy avokoa ny mponina tao Kanana izay tsy naringan’ Israely; Dia toy izany koa ianao: fehezo ireo fahavalon’ny fanahinao fa aza avela ho izy indray no hanjakazaka aminao. Olon’ Andriamanitra ianao: »Aza avela ny ota hanjaka amin’ny tenanao » (Rom 6.12).
3-Manàna fitsipi-piainana amin’ny fanompoanao. Ny and 25 dia milaza ny fanaovan’i Solomona fanatitra in-3 isan-taona . Ianao ve mba mahafehy tena hanompo ara-potoana tsara ny Tompo toy izany , eo amin’ny fanaovana adidy . Ohatra sa baranahiny eny?
Zoma 24 Mey 2019.
Alakamisy 23 Mey 2019.
Alarobia 22 Mey 2019.
Talata 21 Mey 2019.
Alatsinainy 20 Mey 2019.
Alahady 19 Mey 2019.
Sabotsy 18 Mey 2019.
Zoma 17 Mey 2019.
Alakamisy 16 Mey 2019.